May 4, 2019 - MM Live News
ကားမူးတပ်သူများ အမူးပျောက်ဆေးဖြစ်တဲ့ Stugeron ဆေးပြားက်ု သတိထားဘို့လိုအပ်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း…..
May 4, 2019 MM Live
ကောလင်းမြို့နယ် စွယ်ရကျေးရွာမှာ ကားမူးတပ်တဲ့ ၁၇နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကားမစီးခင် အမူးေ ပျာက်ဆေး တစ်ပြားကြိုသောက်မိရာမှ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား ကောလင်း ​မေ ၄ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကောလင်းမြို့နယ် စွယ်ရကျေးရွာမှာ ကားမူးတပ်တဲ့၁၇နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကားမစီးခင် အမူးပျောက်ဆေး တစ်ပြားကြိုသောက်မိရာမှသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ကားမူးတပ်သူများ အမူးပျောက်ဆေးဖြစ်တဲ့ Stugeron ဆေးပြားက်ု သတိထားဘို့လိုအပ်လာပါပြီ ဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာ မေ ၄ရက် နံနက် ၆နာရီအချိန်ခန့်က ကောလင်းမြို့နယ် စွယ်ရကျေးရွာတွင်….. ဆေးသောက်မား၍ သေဆုံးကြောင်းသတင်းအရ ကောလင်းမြို့မခန်းမှူးဒုရဲမှူးငွေမျိုးမြင့်နီ ခန်သာစခန်းမှူးရဲအုပ်ဇော်ထက် အောင်နှင့်အဖွဲ့သည် သက်သေများနှင့်အတူအခင်းဖြစ်ပွါးရာ ….. စွယ်ရကျေးရွာ ဦးဝင်းဦး ဒေါ်တင် တင်နွဲ့တို့၏နေအိမ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ဦးဝင်းဦး၏သမီးမအိချောမွန် ၁၇ နှစ် သည် နေအိမိဧည့်ခန်းတွင် အရှေ့ ဘက်သို့ခေါင်းပြုလျက် နှာခေါင်းမှအမြှပ်များထွက်ပြီး ….. ပါးစပ်မှသွေးအနည်းငယ်ထွက်လျှက် သေ ဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် […]
ဆိုင်ကလုန်းဖန်နီမုန်တိုင်းကြောင့် အိန္ဒိယတွင် ကရိန်းပြိုကျ….
ဆိုင်ကလုန်းဖန်နီကြောင့် အိန္ဒိယတွင် ၁၂ ဦးခန့်သေဆုံး၊ ၁၅၀ခန့် ဒဏ်ရာရဟု ကနဦးသိရ ကုိုးလ်ကတ္တား၊ မေ ၄ ဆိုင်ကလုန်းဖန်နီကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့သြရိဿပြည်နယ်တွင် လူ ၁၂ ဦးခန့်သေဆုံးကြောင်း ယနေ့ညနေပိုင်းက သိရသည်။ ယင်းတို့အနက် ၄ ဦးမှာ သစ်ပင်ပိ၍ သေဆုံးကြခြင်းဖြစ်သည်ဆို၏။ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၅၀ထက်မနည်းရှိကြောင်း သိရပြီး စာရင်းအတိအကျကိုမူ မသိရှိရသေးချေ။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု စာရင်းကိုလည်း အတိကျမသိရသေးချေ။ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရေးပေါ်ဝန်ထမ်း ထောင်နှင့်ချီ၍၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းကာ ရွာပေါင်း တစ်သောင်းခန့်နှင့် မြို့ပြဧရိယာများတွင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိနေကြာင်း တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ဖက်ကမ်းခြေ မြေနိမ့်ဒေသများရှိ လူပေါင်း ၁၂သိန်း နီးပါးခန့်ကို မုန်တိုင်းမ၀င်မီ ၂၄နာရီကြိုတင်၍ ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ”အင်မတန်ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ […]
ခွေးရူး ၊ ခွေးကောင်းကိုက်​ခံရရင်​ ပြုလုပ်ရမည့်အချက်နှင့် ခွေးရူးလက္ခဏာ…..
၁ ။ ခွေးကိုက်​ခံရရင်​ ကိုက်​ခံရသည့် ​နေရာကို ​အရင်​ဆုံး ဆပ်​ပြာနှင့်​တိုက်​၍ ​ရေစင်​စင်​ ၅ မိနစ်​ခန့်​ ​ဆေးပါ။ ၂။ ကိုက်​ခံရချိန်​မှ ၂၄နာရီ အတွင်း ခွေးရူးကာကွယ်​​ဆေးထိုးပါ။ ၄၈နာရီထက်​ ​နောက်​ကျပြီး ထိုးရင်​ ​ဆေးထိုးခြင်းမထိ​ရောက်​ပါတဲ့။ခွေးကိုက်​ခံရတဲ့ ​နေ့မှာ ​ဆေး တလုံးထိုးပါ။(တကြိမ်​) ၃ ။ကိုက်​ခံရတဲ့​နေ့မှ ၃ရက်​ကြာ တလုံးထပ်​ထိုးပါ။(၁၂.၁၂.၂၀၁၈ရက်​​နေ့ ကိုက်​ခံရရင်​ အဲ​နေ့ တလုံးထိုး (၃)ရက်​ကြာ၁၅ရက်​​နေ့ တလုံးထိုးပါ)(၂ကြိမ်​) ၄။ ကိုက်​ခံရတဲ့​နေ့ ပထမ တလုံးထိုးပြီး(၇)ရက်​ကြာရင်​ တလုံးထပ်​ထိုးပါ။(၁၃ရက်​​နေ့မှစတွက်​ . ၁၉ရက်​​နေ့ တလုံးထပ်​ထိုးပါ) (၃ကြိမ်​) ၅။ ပထမတလုံးထိုးပြီး (၁၄)ရက်​ကြာ တလုံးထပ်​ထိုးပါ။(၁၃ရက်​​နေ့မှစတွက်​ . ၂၆ရက်​​နေ့ တလုံးထပ်​ထိုးပါ)(၄ကြိမ်​) ၆။ ပထမတလုံးထိုးပြီး (၂၈)ရက်​ကြာ တလုံးထပ်​ထိုးပါ။(၁၃ရက်​​နေက စတွက်​ . .၉ရက်​​နေ့ […]
အိပ်ပျော်နေသော ပထမတန်းကျောင်းသူလေးကို ပထွေးက အဓ္ဓမပြုကျင့်တဲ့ ဖြစ်ရပ်….
သောက်စားမူးယစ်ပြီး ပထွေးဖြစ်သူမှ အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အား သားမယားအဖြစ် အဓ္ဓမပြုကျင့် ကျွန်းစု မေ ၃ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကံမော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် မေလ(၂)ရက်နေ့၊ (၂)နာရီခွဲအချိန်ခန့်က သောက်စားမူးယစ်ပြီး ပထွေးဖြစ်သူမှ အသက်(၁၀နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အား သားမယားပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကျွန်းစုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကံမော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် မေလ(၁)ရက်ည(၈)နာရီအချိန်တွင် ဒေါ်—-သည် သမီးအကြီးတစ်ယောက်၊ သားငယ်(၃)ယောက်နှင့်အတူအိပ်ယာဝင်ခဲ့ပြီး ည(၂)နာရီအချိန်တွင် ဒေါ်—သည် ရာဘာခြစ်သွားရန် နေအိမ်မှထွက်ခွာသွားစဉ် …… ၄င်း၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူက နာရေးအိမ်မှသောက်စားမူးယစ်ကာ မောင်နွယ်(ခ)မောင်ဝေ အသက်(၄၅)နှစ်အရွယ် ပထွေးဖြစ်သူက အိပ်ပျော်နေသော အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ် ပထမတန်းကျောင်းသူအား သားမယားအဖြစ် အဓ္ဓမပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အသက်ငယ်မုဒိမ်းကျုးလွန်သူ မောင်နွယ်(ခ)မောင်ဝေအား ကံမော်နယ်မြေစခန်းမှ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ – ၃၇၆ အရ အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်း သိရသည်။ Aung Min Naing‎ unicode […]
၆ ရက်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိန်းကလေး ခြေထောက်တွေကိုကြိုးတုတ် မှောက်လျှက်အနေအထားနဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ ပြန်တွေ့….
၆ရက်ကြာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိန်းကလေးကို ကြိုးတုတ် မှောက်လျှက်အနေအထားနဲ့သေဆုံးလျက်ပြန်တွေ့ (28-4-2019)နေ့ကပျောက်ဆုံးသွားသောမိန်းကလေးငယ် မသဉ္ဇာလင်းအသက်(၂၂)နှစ် အားယနေ့သေဆုံးလျှက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ကျုံ​ပျော်​မြို့နယ်​ အ​ထောင်​မြို့ သိန်​ကုန်း​ကျေးရွာမှအထောင်မြို့သို့ခဲအိုဆိုင်ကယ်နှင့်သွားရာသွားမည့်အိမ်ရောက်ခါနီးနှစ်အိမ်လောက်အလိုမှာဆင်းကျန်ခဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးသိခဲ့ပြီး ၆ရက်အကြာပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရာမှ ….. ယနေ့(4-5-2019)နေ့နံက်(11)နာရီဝန်းကျင်​ခန့်တွင် အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မသဉ္ဇာလင်းအသက်(၂၂)နှစ်အ​လောင်းအားလက်နဲ့ခြေတောက်တွေကိုကြိုးတုတ်၍ မှောက်လျှက်အနေအထားနဲ့ …. သိန်​ကုန်းကျေးရွာနှင့်​မန်းကြာကျေးရွာအကြားသုဿန်​အနီးလယ်​ကွင်းစပ်​တွင်​ပုံပါအတိုင်း​​ကျေးရွာသူရွာသားများမှ​တွေ့ရှိခဲ့၍ အပိုင်နယ်မြေရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားရာ အပိုင်နယ်မြေအ​ထောင်​ရဲစခန်းမှ ….. အလောင်းတွေ့ရှိရာသို့ရောက်ရှိလာပြီးသက်​​သေခံများနှင့်​အတူရဲလုပ်​ငန်းစဉ်​များဆက်​လက်​လုပ်​​ဆောင်​ခြင်းလူသတ်တရားခံအားအမြန်​​ဖေါ်ထုပ်​နိူင်​ရန်​​ဆောင်​ရွက်​​လျှက်ရှိ​ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ မမြတ်လေး (ဟင်္သာတ) Unicode ၆ရကျကွာပြောကျဆုံးနတေဲ့မိနျးကလေးကို ကွိုးတုတျ မှောကျလြှကျအနအေထားနဲ့သဆေုံးလကျြပွနျတှေ့ (28-4-2019)နကေ့ပြောကျဆုံးသှားသောမိနျးကလေးငယျ မသဉ်ဇာလငျးအသကျ(၂၂)နှဈ အားယနသေ့ဆေုံးလြှကျပွနျလညျတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ။ ကြုံ​ပြျော​မွို့နယျ​ အ​ထောငျ​မွို့ သိနျ​ကုနျး​ကြေးရှာမှအထောငျမွို့သို့ခဲအိုဆိုငျကယျနှငျ့သှားရာသှားမညျ့အိမျရောကျခါနီးနှဈအိမျလောကျအလိုမှာဆငျးကနျြခဲ့ကွောငျးနောကျဆုံးသိခဲ့ပွီး ၆ရကျအကွာပြောကျဆုံးနခေဲ့ရာမှ ….. ယနေ့(4-5-2019)နနေံ့ကျ(11)နာရီဝနျးကငျြ​ခနျ့တှငျ အလောငျးကို တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။မသဉ်ဇာလငျးအသကျ(၂၂)နှဈအ​လောငျးအားလကျနဲ့ခွတေောကျတှကေိုကွိုးတုတျ၍ မှောကျလြှကျအနအေထားနဲ့ …. သိနျ​ကုနျးကြေးရှာနှငျ့​မနျးကွာကြေးရှာအကွားသုဿနျ​အနီးလယျ​ကှငျးစပျ​တှငျ​ပုံပါအတိုငျး​​ကြေးရှာသူရှာသားမြားမှ​တှရှေိ့ခဲ့၍ အပိုငျနယျမွရေဲစခနျးသို့အကွောငျးကွားရာ အပိုငျနယျမွအေ​ထောငျ​ရဲစခနျးမှ ….. အလောငျးတှရှေိ့ရာသို့ရောကျရှိလာပွီးသကျ​​သခေံမြားနှငျ့​အတူရဲလုပျ​ငနျးစဉျ​မြားဆကျ​လကျ​လုပျ​​ဆောငျ​ခွငျးလူသတျတရားခံအားအမွနျ​​ဖျေါထုပျ​နိူငျ​ရနျ​​ဆောငျ​ရှကျ​​လြှကျရှိ​ကွောငျးသတငျးရရှိပါတယျ။ မမွတျလေး (ဟင်ျသာတ)
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုက်နာသင့်သော လူ့ကျင့်ဝတ်များ ဖုန်းမဖြေရင် ၂ခါထက်ပိုမခေါ်ပါနဲ့။မိမိဖုန်းဖြေဖို့ထက်အရေးတကြီးလုပ်နေတယ်လို့မှတ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးစာပို့ထားလိုက်။ ပိုက်ဆံချေးထားရင် နည်းများမဆိုပြန်ပေးပါ။ ပစ္စည်းငှားထားရင်လဲ အပ်တိုတစ်ချောင်းကအစ၊ ဘောပင်၊ စာအုပ်၊ ထီး အဆုံးအကုန်ပြန်ပေးပါ။ အကယ်၍ကိုယ်ဖျောက်လိုက်မိရင် မူလပစ္စည်းထက်တန်ဖိုးမနည်းတဲ့ဟာဝယ်ပေးပြီး ဆောရီးပြောပါ။ကြားမဖြတ်ပါနဲ့။ ဘာလုပ်လုပ်( အိမ်သာတက်, ကားမောင်းအစ)တန်းစီပါ။ သူများမုန့်ဝယ်ကျွေးတာစားရင် ဈေးအကြီးဆုံးဟင်းလျာ/ စားစရာမမှာပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွေးမွေးဒကာခံသူကိုပဲသူ့စိတ်ကြိုက်မှာပါစေ။ သူများဖြေဖို့အခက်တွေ့စေမဲ့မေးခွန်းတွေမမေးပါနဲ့။ “မယူကြသေးဘူးလား?” “လစာဘယ်လောက်ရလဲ? ” အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ့်နောက်ဝင်မဲ့သူရှိရင်တံခါးကိုဆွဲဖွင့်ပေးထားပါ။(သူတို့ဝင်လာနေရင်ပေါ့) အဲလိုပဲကိုယ်ဝင်လာတာမြင်လို့တံခါးဖွင့်ထားပေးနေသူကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ။ သူငယ်ချင်းနဲ့တက္ကစီအတူပေါင်းစီးလို့ကျငွေသူရှင်းရင်နောက်တခါမဖြစ်မနေကိုယ်ရှင်းပါ။သူတပါးရဲ့နိင်ငံရေးအမြင်သဘောထားကိုလေးစားပါ။ (နိုင်ငံရေးမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်နဲ့သဘောထားချင်းမတူတာကိုလက်ခံပါ) အရေးတကြီးမှမဟုတ်ရင်ညကြီးမိုးချုပ်ဖုန်းမဆက်ပါနဲ့။သူများစကားပြောနေချိန်ကြားဖြတ်မပြောပါနဲ့။ကိုယ်စ နောက်လိုက်တာသူတပါးမကြိုက်ရင် ချက်ခြင်းရပ်ဆိုင်းပါ။ နောက်နောင်လဲအဲဒီလိုဘယ်တော့မှ မစနောက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုကူညီသူတိုင်း(အသေးအမွှားလေးကအစ)ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ။ချီးကျူးစရာရှိရင်လူရှေ့သူရှေ့ချီးမွမ်းပါ။ ဝေဖန်မှုကိုတော့နှစ်ကိုယ်ကြားမှာဝေဖန်ပါလေ။ ကိုယ်ပြောနေတာကိုစိတ်ဝင်စားဟန်မပြရင်လေကုန်ခံပြီးဆက်မပြောပါနဲ့တော့။ သူစိတ်မဝင်စားတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုရင် ခပ်တိုတိုအဖြေပေးတာ၊ အကြည့်တွေတခြားဆီရောက်နေတာ၊ ကိုယ်နဲ့တဖြေးဖြေးဝေးသွားတာမျိုးတွေပေါ့။ ဝိတ်အတတ်အကျနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမဝေဖန်မိပါစေနဲ့။ “ယူသိပ်မိုက်တယ်နော်” လို့သာပြောပါ၊ ဝိတ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးသူတို့စပြောချင်ပြောပါလိမ့်မယ်။ ခရီးရှည်မသွားခင်ရေချိုးသန့်စင်ပါ၊ ကိုယ့်ဘေးမှာထိုင်မိသူကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။ (အရမ်းပြင်းတဲ့ရေမွှေးဆွတ်တာမျိုးတော့ရှောင်ပါ) […]
တောင်ကြီးမြို့ လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတရားခံ ရုတ်တရက် သေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်း…..
လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတရားခံ ရုတ်တရက် သေဆုံးရခြင်းအကြောင်း တောင်ကြီးမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု၏ အဓိက တရားခံအဖြစ်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးခံထားရသော ဦးတင်အုန်းသည် မေလ၄ရက်နေ့လည် ၁၂နာရီခန့်က ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် စဝ်စံထွန်းဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်စဉ် သေဆုံးသွားကြောင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးထံမှသိရသည်။ ” ကျန်းမာရေးက သူ့မှာ ဆီးချို ရှိတယ်။ ဂေါက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။ အချုပ်မှာ ကျန်းမာရေးဖောက်လာလို့ ဆေးရုံပို့တာ ဆေးရုံရောက်ချိန်မှာ သေဆုံးတယ်လို့ပဲသိရသေးတယ်။ အသေးစိတ်ကို ညနေလောက်မှထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဦးတင်အုန်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တစ်ဦး လွတ်မြောက်နေစဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။သံလွင်သွေးချင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကံသာရပ်ကွက်၌ ဧပြီလ ၂၈ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လေးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုအား ကျူးလွန်သူ တင်အုန်းသည် ယနေ့ မေလ ၄ ရက်၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ” စစ်ဆေးမေးမြန်းရင်းနဲ့ […]
အမှိုက်ကောက်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရတဲ့ အမေအိုတစ်ယောက်ရဲ့အပြုံးတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ အလှူရှင်တစ်ဦး…..
ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့အမှိုက်ကောက်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရတဲ့ အမေအိုတစ်ယောက်ရဲ့အပြုံးတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ အလှူရှင်တစ်ဦး လက်တလောပရိသတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့ ပရဟိတအလှူရှင်တွေကတော့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုများပြားလျှက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ကုသိုလ်ရှင်တွေထဲမှာ သာမာန်မရှိဆင်းရဲသားများလှူဒါန်းသူများ၊ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ ဒေသတွေမှာ သွားရောက်လှူဒါန်းသူများနဲ့ လမ်းမပေါ်က ဘဝတွေကို ကူညီသူတွေကတော့ပိုမိုများပြားလျှက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ မကြာသေးမီကလည်း လမ်းမပေါ်အမှိုက်ကောက်တဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အပြုံးတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ပရဟိတအလှူရှင်တစ်ဦးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ကုသိုလ်ရှင်ကတော့ မေစီအမည်ရှိသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေကတော့ ပရိသတ်များစွာကို အံ့အားသင့်စေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ သူမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူတွေများစွာထဲက လမ်းမပေါ်အမှိုက်ကောက်တဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလှူကတော့ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ပြည့်တဲ့အိုးတွေမှာချည်း သွာဖြည့်မနေကြနဲ့ အလကားပဲ ညောင်စေ့လောက် မရဘူးမှတ်။ )Aung Thein Htay.. unicode ဆငျးဆငျးရဲရဲနဲ့အမှိုကျကောကျပွီး အသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုနရေတဲ့ အမအေိုတဈယောကျရဲ့အပွုံးတှကေို ဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ အလှူရှငျတဈဦး လကျတလောပရိသတျတှကွေားမှာရပေနျးစားနတေဲ့ ပရဟိတအလှူရှငျတှကေတော့ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ […]
တောင်ကြီးလေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတရားခံ ယနေ့ရက်လည်ဆွမ်းသွပ်တရားနာသည့်နေ့မှာဘဲ ရုတ်တစ်ရက်သေဆုံးသွားကြောင်း…
BREAKING NEWS လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုတရားခံ ဦးတင်အုံး(၆၀) နှစ်သည် ယနေ့၁၁:၅၀ ချိန်တွင် တောင်ကြီးမြို့မရဲစခန်း အချုပ်ခန်းအိမ်သာတွင်မူးလဲ၍ ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်စဉ် ကားပေါ်၌သေဆုံးသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါသည် ။ တရားခံသည် ပြင်ပဒဏ်ရာများမရှိဘဲ ယခင် မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲခဲ့သည့်ဒဏ်နှင့်မူလဆီးချိုသွေးတိုးရောဂါများရှိကြောင်းသိရှိရပါသည် ။သေဆုံးရသည့်အကြောင်းရင်းကိုတော့ မှုခင်းဆရာဝန်မှစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရှိ ။ ဒီကနေ့သည် လူသတ်မှုဖြစ်ပြီး ရက်လည်ဆွမ်းသွပ်တရားနာသည့်နေ့မှာဘဲ တရားခံသည်ယခုကဲ့သို့ရုတ်တစ်ရက်သေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရပါသည် ။Photo သတင်းစည်သူမောင် unicode BREAKING NEWS လေးလောငျးပွိုငျလူသတျမှုတရားခံ ဦးတငျအုံး(၆၀) နှဈသညျ ယနေ့၁၁:၅၀ ခြိနျတှငျ တောငျကွီးမွို့မရဲစခနျး အခြုပျခနျးအိမျသာတှငျမူးလဲ၍ ဆေးရုံသို့ပို့ဆောငျစဉျ ကားပျေါ၌သဆေုံးသှားကွောငျးသတငျးရရှိပါသညျ ။ တရားခံသညျ ပွငျပဒဏျရာမြားမရှိဘဲ ယခငျ မူးယဈဆေးဝါးမြားသုံးစှဲခဲ့သညျ့ဒဏျနှငျ့မူလဆီးခြိုသှေးတိုးရောဂါမြားရှိကွောငျးသိရှိရပါသညျ ။သဆေုံးရသညျ့အကွောငျးရငျးကိုတော့ မှုခငျးဆရာဝနျမှစဈဆေးနကွေောငျးသိရှိ ။ ဒီကနသေ့ညျ လူသတျမှုဖွဈပွီး ရကျလညျဆှမျးသှပျတရားနာသညျ့နမှေ့ာဘဲ တရားခံသညျယခုကဲ့သို့ရုတျတဈရကျသဆေုံးသှားကွောငျးသိရှိရပါသညျ ။ Photo သတငျးစညျသူမောငျ
“ဖုတ်” ၀င်တယ်ဆိုပြီး သေတဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာစစ်ဆေးလိုက်သောအခါ….
အရမ်းကောင်းလို့ဖတ်စေချင်တယ် ” မသိလိုက်သော ပဉ္စာနန္တရိယကံ ” တကယ်ဖုတ်မဟုတ်ဘဲ မိဘအရင်းကို ဖုတ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုလုပ်ခွင့် ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်သောပဉ္စာနန္တရိယကံကြီးထိုက်ပါတယ်။ ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုပြီး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖွားတစ်ဦး ကိုယ်တွေ့လေ့လာဖူးပါတယ်။ (ဒေသနှင့်အမည်များမပြောပါ။) ဒီအနေအထားက သားသမီးတွေငြိုငြင်ရုံတင်မက မြန်မြန်ပင်သေစေချင်နေပါပြီ။ ကိုယ့်အညစ်အကြေးကိုတောင် ကိုယ်တိုင်မစွန့်နိုင်တော့ဘူး …။ပြုစုတဲ့သူတွေကရွံတတ်တော့ ပိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အဖိုးအဖွားတွေက အသက်သာကြီးတာ ဝမ်းမီးက​ကောင်းတုန်း။အိပ်ရာထဲလဲနေပေမယ့် အစားကို ကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုအစားဝင်နေတာကိုဘဲ မသိနားမလည် ဆရာဝင်လုပ်တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်က “ဖုတ်ဝင်နေပြီ” တဲ့။အသက်ကကြီး ရောဂါက နာတာရှည် ပြုစုရတာကြာလာ​တော့ သားသမီးတွေ ​စေတနာပျက်လာ ပြီလေ။ လူကြီး လူမမာဆိုပြီး ​ကျွေးတာကနည်းနည်း ဆိုတော့ ညသန်းကောင်အချိန်ရောက်တော့ ဆာလာပြန်ရော။ကျွေးတုန်းက မဝသေးဘူးဆိုပြန်တော့ အစားများရင် ချေး(ချီး)ထွက်မယ်ဆိုပြီးပန်းကန်သိမ်း သွားတယ်လေ။ သူတို့ကြွေးတာ စား​နေရတဲ့ […]